New render nke Nokia 9 na-ekpughe ihuenyo na notch | Gam akporosis
Tupu taa onyonyo aka Nokia Nokia pụtara na netwọkụ Weibo. N'oge na-adịghị anya, onye na-ewu ewu na onye na-agba mmiri bụ Benjamin Geskin kesara ihe ngosi nke otu ngwaọrụ ahụ na-ekpughe ọdịdị ya na azụ ya, n'ezie, na-egosipụtakwa igwefoto 5.
Nokia 9 na-egosi a ihuenyo nwere obere ọkwa nke dabara igwefoto na obere okwu maka oku. Akụkụ ndị dị n'akụkụ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị adị, ebe mgbatị dị elu na nke ala dịkwa obere, ọbụlagodi mgbe anyị nwere logo ụlọ ọrụ dị n'okpuru.
Azụ yiri ka a ga-eji iko mee, a mejupụtara igwefoto ise na ọkụ ọkụNa mgbakwunye, o nwere oghere nke yiri ka ọ bụ ihe efu, ọ ga-enwerịrị uru ịse foto. Akara ZEISS dị n’etiti oghere ndị a na akara Nokia nọ n’etiti ngwaọrụ.
Dịka anyị nwere ike ịhụ aka mbụ, enweghị ihe mmetụta mkpịsị aka, yabụ enwere ike ịbanye ihe mmetụta sensọ na ngosipụta ahụa, ọ bụrụ otú ahụ, anyị nwere ike ịkọ na ihuenyo ga-enwe teknụzụ OLED.
Nke a bụ Nokia 9 (2018) nwere igwefoto Penta-Lens. (na-adabere dabere na ntapu) pic.twitter.com/gOQA8W08Cj
- Ugonna Onyekwere (@Ikechukwu_) 6 Septemba nke 2018
Agbanyeghi na asịrị na-ezo aka na igwefoto igwefoto a dịka Nokia 9, ọ nweghị nkwenye na aha ya ugbu a. Ọnwa abụọ gara aga, a na-ewu ewu leaker ọzọ kpughere na ụlọ ọrụ na-esote n'ọnụ ụlọ ọrụ a ga-akpọ Nokia A1 gbakwunyere.
Ewezuga ihe mmetụta dị n’ime ya na ngosipụta OLED ngwaọrụ asịrị na-kwadoro site na Snapdragon 845 processor.
Ihe ngosi a dị n'elu na-egosi ihe a na-atụ anya na ngwaọrụ ahụ, ọ bụ ezie na n'ikpeazụ, a ga-ewepụ ọkwa ahụ, ọ dịghị ihe doro anya ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ enyebeghị data maka ngwaọrụ a.
Ihe ndị mejupụtara ya na ese foto ise ga-abụ ihe eji agagharị agagharị n’ọdịniihu ka ọ bụ sọọsọ nnwapụta dọọrọ mmasị ndị na-ese foto?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ntughari ohuru nke Nokia 9 na-ekpughe ihuenyo na notch
[APK] Download ugbu a ọhụụ Netflix ọhụrụ ahụ na igodo na ala
Galaxy View 2 gafere Wi-Fi Alliance na asambodo Bluetooth SIG